Mkpado: CRM | Martech Zone
Ahịa arụmọrụ dị mkpa maka azụmahịa ọ bụla na-eto eto. Site na ndị otu na-ere ahịa, ha na-enwe mkpali karịa ma jikọọ na ebumnuche na ebumnuche nke nzukọ a. Mmetụta na-adịghị mma nke ndị ọrụ ewepụrụ na nzukọ nwere ike ịdị oke - dị ka arụpụtaghị ọrụ, na ịla n'iyi na akụrụngwa. A bịa na ndị otu ahịa ọfụma, enweghị itinye aka na-efu azụmaahịa na-enweta ego ha ga enweta. Ulo oru agha gha acho uzo iji tinye aka na ndi otu ahia, ma obu ihe egwu